ကိုရီးယားထိပ်တန်းနာမည်ကျော် EXO အဖွဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံး သီချင်းအပုဒ် (၂၀)
လက်ရှိအချိန်မှာ EXO ဟာ နာမည်အကြီးဆုံးကိုရီးယားအဆိုတော်အဖွဲ့တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ debut လုပ်ခဲ့တာ ၆နှစ်ကျော် ၇နှစ်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်နေဆဲ ဖြစ်နေတာကြောင့် EXO အဖွဲ့ဟာ အံ့မခန်းပါပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့အကြီးဆုံး သီချင်းဆိုဒ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gaon Chart မှာ download ဆွဲနှုန်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ EXO သီချင်းအပုဒ် ၂၀ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ လူနားထောင်မှုအများဆုံး ဖြစ်နေတာဟာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် မဟုတ်လားရှင်? ဒါ့ကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ ထွက်ရှိသမျှသီချင်းတွေထဲက download ဆွဲနှုန်းအများဆုံးသီချင်းတစ်ဖြစ်လဲ EXO ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး သီချင်း အပုဒ် ၂၀ပုဒ်ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိုမိုလေးနဲ့တူတူလိုက်ပါစီးမြောကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်။
19. Christmas Day
17. Tender Love
15.the first snow
13. Lucky One
9. Dancing King
8. Sing For You
7. Miracle in December
3. Ko Ko Bop
တကယ့်ကို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ သီချင်းတွေပါပဲနော်။ သူတို့သီချင်းတွေဟာ နားထောင်လိုက်တိုင်း ရင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေ့သစ်တစ်ခုကို အားအင်အပြည့်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ရာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ သင်ကော EXO ရဲ့ဘယ်သီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။
Aug 16 2019 (8605 views)
Aug 16 2019 (8773 views)
Aug 17 2019 (3224 views)
Aug 16 2019 (4234 views)
Aug 17 2019 (1696 views)
Aug 17 2019 (1100 views)
Aug 17 2019 (1160 views)
Aug 17 2019 (1238 views)